दलालको मा’ध्यमबाट बो’लाएकी यौ नक’र्मी यु’वती आफ्नै श्री’मती परेपछि…
अपराध दलालको मा’ध्यमबाट बो’लाएकी यौ नक’र्मी यु’वती आफ्नै श्री’मती परेपछि…
कहिलेकाहीँ श्रीमान–श्रीमतीको अगाडि यतो परिस्थिति आउँछ कि दुवैले केही गर्न सक्दैनन् । दुवैले एक अर्कालाई धोका दिएर बाहिर सम्बन्ध बनाएको अवस्थामा निकै संकट पर्न सक्छ । यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तराखण्डको काशीपुरमा भएको छ । आज तकका अनुसार यहाँ एक व्यक्तिले कलगर्ल बोलाएका थिए । जब उनले बोलाएकी कलगर्ल उनको अगाडि पुगिन् युवतीको होसहवास उड्यो । ती कलगर्ल उनकै श्रीमती थिइन् ।
खासमा ती श्रीमानले ह्वाट्सएपमार्फत एक दलालसँग सम्पर्क गरेर कलगर्ल पठाउन भनेका थिए । दलालले पठाएकी कलगर्ल आफ्नै श्रीमती परेपछि श्रीमान श्रीमतीबीच ठूलै विवाद र हातपात समेत भयो । दुवैले एक अर्काविरुद्ध पुलिसमा उजुरी गरेका छन् । केही वर्ष पहिले दिनेशपुरका युवकको बिहे काशीपुरको आइटिआइ क्षेत्रमा बस्ने युवतीसँग भएको थियो । तर, बिहेपछि नै श्रीमती श्रीमानसँग नबसेर माइतीमा बस्न थालेकी थिइन् । उनको धेरै समय माइतीमै बित्थ्यो, घरमा निकै कम समय बस्थिन् । एक दिन ती युवतीकी एउटी साथीले उनका श्रीमानलाई उनकी श्रीमतीले कलगर्लको काम गर्ने गरेको बताइदिइन् । आफूहरुबीच झ गडा परेको रिसमा उनले साथीका श्रीमानका अगाडि पोल खोलिदिएकी थिइन् ।
त्यसपछि श्रीमानले श्यामपुरमकी एक महिला दलालसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क गरेर कलगर्ल पठाउन भने । दलालले केही फोटो बताएर युवती रोज्न भनिन् । युवकले आफ्नी श्रमितीको फोटो रोजे । महिला दलालको नम्बर उनलाई श्रीमतीकी साथीले नै दिएकी थिइन् । त्यसपछि जब कलगर्लको रुपमा उनकै श्रीमती उनको अगाडि आइन्, उनीहरुबीच ठूलो लडाइँ भयो । अहिले श्रीमतीले आफ्ना श्रीमानको आफ्नी साथीसँग सम्बन्ध भएको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेकी छिन् भने श्रीमानले श्रीमतीको यौ नध न्दाको विषयलाई लिएर उजुरी गरेका छन् ।
दु:खद खबर राजेश हमालका भाइ राकेशको नि’धन
७ साउन, काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमाललाई पारिवारिक शो’क परेको छ । उनका एक मात्र भाइ राकेश हमालको नयाँ दिल्लीमा उपचारको क्रममा नि’धन भएको हो ।
कलेजोको स’मस्याका कारण केही दिनअघि प्लेन चार्टर्ड गरेर उनलाई दिल्ली पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँको ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका नि’धन भएको पारिवारिक स्रोतले बतायो ।
राजेश र भाइको उमेरमा करिब डेढ वर्षको अन्तर छ । राकेश चलचित्र क्षेत्र भन्दा बाहिर थिए ।
राकेशका श्रीमती र दुई छोराछोरी छन् । राजेशका दम्पत्ति र भाइको परिवार काठमाडौंमा एउटै घरमा बस्छन् । उनीहरुका तीन दिदीबहिनी छन् । राजेश र भाइको उमेरमा करिब डेढ वर्षको अन्तर छ । राकेश चलचित्र क्षेत्र भन्दा बाहिर थिए ।
भाइ राकेशसँग राजेश हमाल ।
राजेश अहिले काठमाडौंमा नै छन् । राकेशको श’वलाई दिल्लीबाट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ
श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”
श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो” हेर्नुहोस पुरा भिडियो :श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती,
वी’र्य खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय समाजको मान्यता भएकाले धेरै शक्ति खेर जान्छ भन्ने सोच छ, तर त्यसमा सत्यता छैन। वीर्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ।
सांकेतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बीजका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व जायज नै लाग्छ। यो शक्ति आफैंमा ठूलो तथा महत्त्वपूर्ण छ।
पोषणका दृष्टिले हेरिने शक्तिको कुरा गर्दा एक सामान्य व्यक्तिलाई १ हजार ८ सयदेखि २ हजार २ सय क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ र एकपल्टको वी’र्य स्खलनमा यस्तै १५ क्यालोरीजति हुन्छ। यौ’न स’म्पर्क गर्दा वा त्यस अघिपछिका शारीरिक क्रियाकलापदेखि लि’ङ्ग उ’त्तेजना, रस निस्कने, वी’र्य स्खलनजस्ता कतिपय क्रिया-प्रक्रियामा पनि शक्ति (क्यालोरी) खर्च हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन,
तर यौ’न स’म्पर्कभन्दा ह’स्तमैथुनमा कम ऊर्जा खर्च हुन्छ। त्यसैले ह’स्तमैथुनलाई दुब्लोपनको दो’ष दिनु जायज छैन। बरु तपाईंले पोषण र व्यायाममा ध्यान दिनुहोला।
एकदमै दुब्लो,पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ! यी चीज यसरि खानुस् त्यसपछि ५ दिनमै हुने छ चमत्कार हेर्नुहोस
कोही व्यक्ति जति खानेकुरा खाए पनि फुर्तिलो,बलियो जाँग रिलो र मोटो हुँदैनन्।जति सुकै प्रोटिन युक्त वा सन्तुलित खाना खाए पनि एक दम दुब्लो,पातलो र कमजोर हुन्छन् । आफ्नो शरीरलाई लिएर उनीहरु चिन्तित पनि हुन्छन् ।
दुब्लो पातालो भएकै कारण कतिपय मानिसहरु तौल बढाउने अर्थात् मोटाउने औषधी खान्छन् तर यस्ता औषधीहरुले स्वास्थ्यमा गम्भीर हाने पु¥याउने गर्छ ।
चिकित्सकहरु पनि यस्ता औषधिहरु सेवन नगर्न सुझाव दिन्छन् ।हाम्रो शरीरको वजन बढाउन र पातलो वा दुब्लो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन कार्बो हाइड्रेट र प्रोटिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रोटिन र कार्बो हाइड्रेटले भरिपूर्ण केही चिजहरुको खानाले साता दिनमै तपाईको शरीरको वजन बढ्नेछ ।
तपाई शरीरको तौल बढाउँन चाहानुहुन्छ भने घरमा साबुदानाको खीर र आलु खानुहोस ।
हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस् । यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो मोटो र मजबुत हुन्छ।त्यस्तै उसिनेको आलु खानुस् यसले पनि तपाईको तौल बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ। यो तरिका तौल बढाउनको शत प्रतिशत प्रभावकारी हुने आयु र्वे्दिक घरेलु उपाय हो।
हस्तरेखा ज्योतिषको सहायताले हत्केलामा बनेका रेखा मार्फत व्यक्तिको जीवनमा हुने कैयौं महत्वपुर्ण कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । हातमा बनेका रेखामा जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा र विवाह रेखा प्रमुख हुने गर्दछन् ।
यी १० गलत बानी हुन् दिमाग कमजोर बनाउने
उमेर वृद्धिसँगै स्मरण शक्तिमा ह्रास आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ तर युवा अवस्थामा नै यदि कुनै व्यक्तिको स्मरण शक्तिमा कमि आउँदै गएको छ भने त्यसको पछाडि कुनै गम्भीर कारण हुनसक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
ज्योतिष बाजे बनेर हात हेर्न बस्दै, युवती फसाउँदै…
अहिले सामाजिक क्षेत्रमा बिभिन्न प्रकारका नकरात्मक गतिबिधि हुदैँ गएका छन्। काेहिले ब ला त्कार गरेका छन् भने कसैले कुनै न कुनै लाप-रबाहि गरेकै छन्।
यी हुन् दु’नियाँकै ठूलो ओ’ठ भएकी युवती
बुल्गेरियाकी एन्ड्रिटा इभानोभा विश्वमा सबैभन्दा ठू’लो ओ’ठ भएकी महिला हुन् ।
गोर्खा सैनिकले मोदीलाई यस्तो गर्न अपिल गरेपछि भारतमा हंगामा ! के होला अब ?
गोर्खा सैनिकले मोदीलाई यस्तो गर्न अपिल गरेपछि भारतमा हंगामा ! अब के होला ?गोर्खा सैनिकले मोदीलाई यस्तो गर्न अपिल गरेपछि भारतमा हंगामा !
गोर्खा सैनिकले मोदीलाई यस्तो गर्न अपिल गरेपछि भारतमा हंगामा ! के...